Mila fiarovana ny ala honko: 7000 ha hatramin’ny 8 000 ha ny rava isan-taona | NewsMada
Mila fiarovana ny ala honko: 7000 ha hatramin’ny 8 000 ha ny rava isan-taona
Harena voajanahary manana ny mampiavaka azy manokana ny ala honko (mangroves). Ho an’ny karazana famokarana (tantely, landy …), fiarovana amin’ny andro ratsy; fiarovana ny tontolo iainana ary ahafantaran’ny maro ny ala honko, fonenan’ny drakaka sy makamba. Raha jerena ireo, miantoka ny fiainan’ny olona monina morontsiraka eo amin’ny fivelomany ny ala honko. Fanadihadiana sy fikarohana maro ny nahafantarana fa mihena ny honko, 7 000 ha hatramin’ny 8 000 ha ny rava isan-taona. Koa miara-miasa mifanaraka izao, nanao sonia omaly, ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, ny jono ; ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Mpamatsy vola ny USAID Hay Tao, miara-miasa amin’ny CNGIZC*.
Tena antony amin’ny fitrandrahana izany sy mandripaka azy ny fahantran’ny mponina. Haingana ny fisehoan’izany faharavan’ny ala izany, misy fiantraikany any amin’ny drakaka sy ny makamba, miharatsy kalitao hatrany. Eo koa ny fitrandrahana tafahoatra ireo harena an-dranomasina ireo, antony iray hafa maharava ny ala honko. Raha ny tatitra voaray, tsy misy akony amin’ny fiarovana io karazan-kazo io ny fandrarana fikapana azy. Vao mainka aza mahazo vahana ny fitrandrahana azy, araka ny fitombon’ny mponina, ambanivohitra na an-tanàn-dehibe. Ohatra ny fanaovana harina fandrehitra.
Na izany aza, misy ihany ny fandraisana andraikitra ho fiarovana azy ireny, fiaraha-miasa eo amin’ny sehatra tsy miankina, fikambanana miaro ny faritra misy honko, ary ny mponina eny ifotony. Mbola tsy hita loatra ny vokatra tsara aterak’izany eo amin’ny fihariana fiveloman’ny mponina any am-potony. Efa nisy atrikasa natao tany Toliara, ny volana jolay 2019, koa aoka izay ny atrikasa, andrasana ny vokatry ny asa.